Faritra avo eto an-drenivohitra Vato lehibe 3 ahiana hianjera
Vato telo lehibe 3 no ahiana mbola hihotsaka eny amin’ireo faritra avo eto an-drenivohitra ka anisan’ireny ny ao amin’ny Fokontany ambanin’Ampamarinana.
Taorian’ny niavian’ny ranon’orana afakomaly hariva iny mantsy dia marobe ireo fako sy riaka avy any ambony nirotsaka tao amin’ity fokontany ity, antony iray mety hampihotsaka izany tampoka. Miezaka ny manentana ny mponina sy mijery ny zava-misy ny sefom-pokontany ao an-toerana. Tsy voatery ho amin’ny andro alina ihany mantsy raha araka ny fanazavany no hianjeran’ireo vatobe ireo fa mety ho amin’ny andro atoandro mahabe olona mivezivezy ihany koa. Ankoatra ity fokontany iray ity dia tandindomin-doza ihany koa ireo mponina ao amin’ny fokontany Tsimialonjafy…. Mikasika ilay vatobe nianjera tamin’ny 03 febroary lasa teo ka nahafatesana olona maromaro dia fantatra fa mbola misy amin’izy ireny no tavela ao an-tokantranon’ireo olona lasibatra ka tsy hitan’ny fokontany izay hatao.
Legende : Tandindomin-doza indray ny faritra avo ( Sary nindramina )